Mayelana NATHI - Goodao Technology Co, Ltd.
Ishaja sebhethri ne-Star Star
Ama-Tail & Kits Trailer Kits
Izibani eziphuthumayo / zeBeacon
Isungulwe ngo-1995, I-HANGZHOU TONNY Electronics ne-TOOLS CO., LTD.ungomunye wabakhiqizi abaphambili nabahlinzeki bempahla kagesi yezithuthi namathuluzi eChina. Ifektri yethu itholakala eXianlin Industrial Zone, Yuhang District, Hangzhou 311122, Zhejiang inomhlaba wamamitha-skwele angama-20,000 nomhlaba wokwakha wamamitha ayi-15,000.
Inkampani yethu isebenza ngokuklama, ukwakhiwa kanye nokusatshalaliswa kwemishini kagesi yezimoto namathuluzi, njengamashaja ebhethri wemoto, ama-inverters, ama-jumpers, amalambu omsebenzi, amalambu we-beacon, abalandeli bezimoto, abalandeli be-DC abaphathekayo, amaphampu omoya, umshini wokuhlanza we-auto vacuum, njll. yenza nezinsizakalo ze-OEM ne-ODM. Umthamo omkhulu wokukhiqiza womugqa ojwayelekile womhlangano oyi-14, imishini eminingana esezingeni eliphezulu, kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-450 bangamandla ethu ayisisekelo wokukhiqiza, njengokulawula kwekhwalithi eqinile, simise ilebhu yokuhlola yobuchwepheshe ehlome ngokuphelele ngamathuluzi wokuhlola aphezulu nokuhlola. Iqembu eliqeqeshiwe le-QC &QA lingakuqinisekisa ukufeza i-ISO9001: uhlelo lokulawula ikhwalithi lwe-2015. Ngaleso sikhathi, ithimba le-R&D lonjiniyela abangaphezu kwama-20 abanolwazi luthuthukisa imikhiqizo emisha yokuhlinzeka ngosizo oluphelele lobuchwepheshe ngemuva kokuthengisa.
Ingqikithi yendawo yefekthri
UMnyango weR & D
Inani lonjiniyela: abantu abangama-20
Isoftware Yokwakheka: Ama-Solidworks, Pro / E, Rino, njll.
Nikeza i-OEM ne-ODM kumakhasimende ngokwamasampula awo, imidwebo noma imiqondo; Nikeza iziphakamiso ezidingekayo kumakhasimende ukuze kugcinwe ikhwalithi futhi ihlangabezane nezidingo zemakethe.
Ithimba Lokwakha Ngogesi
Ithimba Lokwakha Izakhiwo
Isitshalo somjovo weplastiki
Umthamo womjovo weplastiki: 100g kuya ku-2500g;
Inani lomshini: 20+
Umthamo omkhulu wokukhiqizwa kwemigqa emihlanganweni engu-14 ejwayelekile nabasebenzi abangaphezu kuka-450 bangamandla ethu ayisisekelo okukhiqiza, Iqembu le-QC&QA eliqeqeshiwe lingakuqinisekisa ukufeza i-ISO9001: uhlelo lokulawula ikhwalithi ye-2015.
Sinesindawo esigcini se-100,000 sezinyawo, lapho sihlangabezana nesicelo sekhasimende sokugcinwa
Isistimu: Kusetshenziswe uhlelo lwe-ERP phakathi nayo yonke le nkambo.
Sineqembu elinolwazi lokufunda izinto. Iningi labo lineminyaka engaphezu kwe-15 yesipiliyoni
Singakwazi ukulayisha iziqukathi ze-3x40HQ ngasikhathi sinye.
Isigaxa Esilayisha Amasango
Besilokhu sakha imikhiqizo emisha, futhi sisebenzela amakhasimende ethu kuyo yonke izimakethe zomhlaba. Amakhasimende ethu ahlonishwayo ajabulela ukuthandwa okwengeziwe emhlabeni, njengeWal-Mart, i-Autozone, iScotts Company, i-Advance Auto Parts ne-Lidl njll.
& Shesha usesikhathini
Ngemibuzo ngemikhiqizo yethu noma nge-pricelist, sicela uxhumane nathi futhi sizoxhumana kungakapheli amahora angama-24.
Ikheli:No.1 Jiaqi Road, Xianlin Industrial Zone, District Yuhang, Hangzhou, China